VLC dia ho avy tsy ho ela amin'ny Apple TV vaovao | Avy amin'ny mac aho
VLC dia mitady tester beta ho an'ny fampiharana azy amin'ny Apple TV vaovao
Vao herinandro lasa izay dia natombok'i Apple tamin'ny fomba ofisialy ny Apple TV vaovao miaraka amin'ny rindrambaiko sy fivarotana azy manokana, tsikelikely dia feno ny rindranasa ary ny mpandrindra dia miadana ihany koa nefa mampifanaraka ny fangatahan'izy ireo amin'ity fitaovana ity. Azo antoka fa mampiasa ny mpilalao VLC ho an'ny OS X ianao, ahafahantsika mijery karazana atiny rehetra ao amin'ny Mac anay. Ity rindranasa ity izay nivoaka ny fivarotana fampiharana Apple ho an'ny iOS eo ho eo. mandritra ny herintaona noho ny olana amin'ny fahazoan-dàlana nampiasaiko nefa tsy nandalo ilay boaty, fa izay niverina volana vitsivitsy lasa izay, dia mitady mpanandramana beta hanombohana ny fitsapana ny VLC ho an'ny Apple TV.
Ny kinova VLC farany ho an'ny iOS mamela antsika hilalao atiny mivantana avy amin'ny Dropbox, iCloud, Google Drive, OneDrive ary Box ho fanampin'ny fanohanana saika ny endrika horonan-tsary sy feo ampiasaina ankehitriny afa-tsy ny endrika AC3. Ny kinova VLC dia ho dika mitovy mitovy amin'ny kinova iOS, manohana ireo endrika mitovy sy ny fahaizana mamerina atiny avy amin'ny rahona samihafa izay ananantsika kaonty. Fampiharana iray hafa handefasana atiny izay nohavaozina haingana ho an'ny Apple TV, dia i Plex, izay tonga tao amin'ny Apple TV App Store tamin'ny herinandro lasa teo ary mamela antsika hilalao ny atin'ny Mac amin'ny Apple TV.
VLC ho an'ny iOS koa mamela antsika hamerina ny atiny voatahiry ao amin'ny Mac misy ny lozisialy mpizara Plex, raha tsy te-hamakivaky ilay boaty izahay, na dia mendrika ny mandoa an'i Plex aza ny fampahalalana rehetra atolotray anay momba ireo sarimihetsika sy andian-tsarimihetsika notehirizinay tao amin'ny Mac anay. Raha liana amin'ny ho VLC ianao programa beta tester ho an'ny Apple TV vaovao, azonao atao izany ajanony ity rohy manaraka ityAndao hojerentsika raha tsara vintana ianao ary ianao dia iray amin'ireo voafidy afaka manandrana mpilalao horonantsary maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny fitaovana rehetra, na inona na inona ny rafitra fiasa nametrahana azy, satria mifanaraka amin'ny sehatra rehetra sy ny rafitra fikirakirana finday eo amin'ny tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » VLC dia mitady tester beta ho an'ny fampiharana azy amin'ny Apple TV vaovao
DiskKeeper Advanced Cleaner, manampy anao hanadio ny Mac
Ahoana ny famoahana ny fako tsy misy olana ao amin'ny Finder